Safiir Ku xigeenka Britain ee Itoobiya oo kulamo la yeeshay madaxweynaha iyo xisbiyada | FooreNews
Home wararka Safiir Ku xigeenka Britain ee Itoobiya oo kulamo la yeeshay madaxweynaha iyo xisbiyada
Safiir Ku xigeenka Britain ee Itoobiya oo kulamo la yeeshay madaxweynaha iyo xisbiyada
fooreFeb 02, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Safiir Ku xigeenka Ingiriiska u fadhiya dalka Itoobiya Mr, Chris Allan, ayaa maanta socdaal maalin qaatay ku yimid dalka, waxaanu kulamo kala duwan la yeeshay Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamuud (Siilaanyo) iyo xisbiyada mucaaridka ah ee UCID iyo UDUB.
Ma Jiro wax war ah oo xukuumadda Somaliland iyo Safiir Ku xigeenka Ingiriisku ka soo saareen kulankii Madaxweynaha ay yeesheen, hase yeeshee waxa warar xog ogogaal ahi oo aanu ka helay kulankaasi ay sheegayaan inay ka wada hadleen shirka dawlada Ingriisku ay ku qabanayso magaalada London 23-ka Bishan Febarwari.
Sidoo kale, Mr. Chris Allan ayaa maanta kulan la yeeshay Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Md, Faysal Cali Waraabe iyo Garabka Cali Waran-cadde ee xisbiga UDUB.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID Md. Faysal Cali Waraabe oo kulankaasi ka dib saxaafada la hadlay ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha shirka London waxaanu yidhi “Waxa uu u socday Safiir Ku xigeenku waa shirka London,waanaga la shirnay waxa shirkan lagaga hadlayaa arrimaha budhcad badeedka,nabadgelyada iyo arrimaha Somalia sidii wax looga qaban lahaa waxaana ka qeyb galaya dawlad goboleedyadii yar yaraa ee ay ka mid yihiin Puntland, Gal-mudug, Ehelu Suna wal jamaaca iyo TFG-dii. Inagana waxa la inagu yidhi kaaliya shirkan waa la idinka faa’iidaysanayaa, idinkuna waad ka faa’iidaysan doontaane’e. waxaan filayaa inay su’aalo ay xukuumadeenu tidhi noo soo cadeeya Ingiriiska inuu waday Safiirku.marka arrintaasi loo soo cadeeyana waxaan dawlada ka filaynaa in sidii ay balan qaaday in wada tashi la iskugu yimaadaa.”
“Midna waanu idiin cadeynaynaaye’e suuqa waxa la geliyay UCID waxay leedahay shirka hala tago anagu ha la tago ma aanu odhane’e waxaanu nidhi ha la wada tashado oo shirkaasi nuxurkiisa ha la ogaado,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga UCID.
“Mana rabno inuu shirkani noqdo mid inaga Somaliland inakala burburiya,”ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Wasiirkii hore ee Hawlaha Guud Siciid Sulub Maxamed, ayaa sheegay inay safiir Ku xigeenka Ingiriiska u sheegeen inaanay Somaliland wax dani ugu jirin ka qeyb galka shirkan.
“Waxaanu u sheegnay mowqifka xisbigayaga ee ku wajahan Shirkaasi waxaana aanu u sheegnay inaanu shirkaasi Somaliland wax dani ugu jirin kana mid ahayd maamul goboleedyada Puntland,”ayuu yidhi Siciid Sulub.
Wasiirkii hore ee wasaarada warfaafinta Md. Axmed Xaaji Daahir Cilmi, ayaa sheegay inay danjirahaasi ay u sheegeen inaanay Somaliland soo garab fadhiisan doonin maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug.
Safiir ku xigeenka Britain u fadhiya addis ababa Mr. Chris Allan waxa uu dalka yimid 18-kii bishii January ee aynu soo dhaafnay xiligaasi oo uu si rasmi ah xukuumadda Somaliland u soo gaadh siiyay martiqaadkii shirka London.
Previous PostXukuumadda Oo shaacisay inay aqbashay shirka London, kana hadashay qodobo ay kala hadleen Itoobiya Next Post“Safiirku wuxuu cadeeyay inaanu shirkani saamayn ku lahayn qadiyada gooni isu taaga Somaliland”